Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. राष्ट्रिय महिला आयोग दुई वर्षदेखि नेतृत्वबिहीन – Emountain TV
काठमाडौं, १ भदौ । संवैधानिक आयोगको मान्यता पाएको राष्ट्रिय महिला आयोग दुई वर्षदेखि नेतृत्वबिहीन बनेको छ । आयोगका पदाधिकारीहरुको पदावधी सकिएको दुई वर्ष बितिसक्दा समेत राजनीतिक खिचातानीले आयोगले अहिलेसम्म नेतृत्व पाउन सकेको छैन । नेतृत्व पाउन नसक्दा आयोगमा दैनिक रुपमा पर्ने महिला हिंसा सम्बन्धी उजुरीले समेत समयमै निकास पाउन सकेको छैन ।
२०७२ सालको नयाँ संविधानले राष्ट्रिय महिला आयोगलाई सम्बैधानिक आयोगको रुपमा मान्यता दिएको हो । संवैधानिक आयोगको रुपमा मान्यता पाएको दुई वर्ष बितिसक्यो आयोगले नेतृत्व भने पाउन सकेको छैन । आयोगका पदाधिकारी अध्यक्षसहित पांच सदस्यीय हुने व्यवस्था छ । आयोगको पदाधिकारीको लागि दरखास्त आव्हान पनि भइसकेको हो तर नियुक्ति भने हुन सकेको छैन ।
अधिकारकर्मीबाट नेतृत्व चयन गर्ने कि पार्टि पंक्तिकै नेता कार्यकर्ताबाट नेतृत्व चयन गर्ने भन्नेमा सत्तारुढ दललको शीर्ष नेतृत्वमाथि दबाब छ । नेतृत्व नहुँदा आयोग अहिले जेनतेनले कर्मचारीको भरमा चलिरहेको छ ।
कानुनअनुसार महिला आयोगमा अध्यक्षसहित पाँच जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । नयाँ ऐन जारी भएको र पुरानो ऐन खारेज भएको अवस्थाले आयोग पदाधिकारीबिहीन भइरहेको छ । तर नयाँ व्यवस्था भएको दुई वर्ष बितिसक्दा समेत नेतृत्व चयन नहुँदा आयोगको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
पछिल्लो समय विशेष गरेर घरेलु हिंसा र सम्बन्ध बिन्छेद सम्बन्धी मुद्दा धेरै आउने गरेका छन । शिक्षाको कमि , पितृसतात्मक सोच,कमजोर मानसिकताको कारण पनि महिला हिंसाका घटनाहरु दिनानुदिन बढदै गएका छन् ।
राष्ट्रिय महिला आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई शंसोधन र एकीकरण गर्न बनेको एन २०७४ ले महिला सशतिकरणका लागि महिलासंग सम्बन्धित नीतिगत कानुनी तथा तथा नेपाल सरकारका कार्यक्रमको समिक्षा तथा मुल्याङकन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्रिय महिला आयोगले सामान्य समस्याको मेलमिलापबाट समाधा गर्ने र समाधान हुन नसकेका मुद्दाहरुमा नेपाल बार एशोशिएसनमार्फत निशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्ने काम गर्देै आएको छ । आयोगमा दैनिक १५ वटाको दरले महिला हिंसाको उजुरी पर्ने गरेको छ ।
सरकारले २ वर्षदेखि सर्वाेत्कृष्ट निजामति कर्मचारी छनोट गर्न सकेन